China 3-Layer Anti-bakteria fanary mason-tarehy azo ampiasaina amin'ny endrika ambaratonga 1 / fanamboarana sy orinasa I | Shuer
Saron-tarehy miendrika anti-bakteria azo ampiasaina 3-Layer haavo 1 / Type I
Azo atao ny manisy tombo-kase
Kaody vokatra: karazana 1
Mamporisika ny Oregonianina izahay hanohy hitahiry ny saron-tsarimihetsika ho an'ny mpitsabo izay mila azy ireo indrindra. , ny fahombiazan'ny filtration avo lenta fanoherana ambany, ahazoana aina, manohitra bakteria, mamporisika ny olona izahay hisaron-tava tarehy ho an'ny mpitsabo, tsara ho anao sy ny fianakavianao izany.
Ny sarontava miaro amin'ny fitsaboana dia mety ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana sy ireo mpiasa mifandraika amin'ny fiarovana aretin-kozatra vokatry ny areti-mifindra, dia karazana fitaovana fiarovan-tena miaro tena, karazana fiarovana avo lenta, mety indrindra amin'ny hetsika ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny rivotra na fifandraisana akaiky amin'ny marary miaraka amin'ny tsiranoka amin'ny lalan-drà rehefa avy nitafy. Afaka manivana sombintsombona amin'ny rivotra izy io, manakana ny vongan-drano, rà, tsiranoka amin'ny vatana, tsiambaratelo, sns. Anisan'ny vokatra azo ampiasaina io. Ny sarontava medikaly dia manakana ny ankamaroan'ny bakteria, viriosy, ary otrikaretina hafa. Nanoro hevitra ny OMS fa ny mpitsabo dia mampiasa respirator anti-partulateur mba hisorohana ny aretina virus amin'ny rivotra hopitaly. Teknolojia famehezana roa sosona, ny sarontava dia tsy mora simba ary manana fika tsara kokoa. Ny baoritra orona dia voaisy tombo-kase ary tsy hihetsika amin'ny fametahana tsara kokoa ny teknolojia fantsom-bozaka Square, notsapaina tamin'ny masinina fitiliana ny maska, mafy orina kokoa, tsy mora vaky. Taorian'ny fitsapana sy ny valin'ny hevitry ny mpanjifa dia natao hatramin'ny halava tonga lafatra ny earband
Teo aloha: Saron-tava tsy azo ovaina miady amin'ny bakteria 3-Layer (loko hosodoko)
Manaraka: Plus 3-Layer Saron-tava fitsaboana anti-bakteria haavo 2 / Type II
Plus 3-Layer Anti-bakteria haavo saron-tava ...
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava Ffp3, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply,